Iibso 100% Saliid Muhiim ah oo Muhiim ah Si Looga Yareeyo Cadaadiska & Duugista Duugista - Maraakiib Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
100% Saliid Muhiim ah oo Aas -Aasi ah oo Ka Dhigta Diiqada & Duugista Duugista
$ 26.99 qiimaha joogtada ah $ 39.99
urta Ylang ylang Rose Frankincense peppermint Lemon lavender Shaaha
150 ml / Ylang-ylang 150 ml / Rose 150ml / Faleen 150ml / basbaas 150ml / Liin dhanaan 150 ml / Lavender 150ml / Geedka Shaaha
100% Saliid Muhiim ah oo Aas -Aasiya ah Si Looga Yareeyo Cadaadiska & Duugista Maskaxda - 150ml / Ylang ylang gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Saliida Muhiimka ah: Saliid Muhiim ah oo Saafi ah
Nambarka Tusaalaha: 8045315
Isticmaalka: Udugga Maydhista Udugga Maydhashada
Isticmaalka: Saliidaha Muhiimka ah ee Muhiimka ah ee udugga
100% saafi ah 150ml saliidaha udugga udugga
Ma jiraan wax lagu daro, ma buuxsamaan, Saliid Muhiim ah oo saafi ah. Ballan -qaad aan kala go 'lahayn oo ku wajahan badeecadaha ugu tayada sarreeya
Saliidaha Muhiimka ah ee Dhameystiran ayaa loo dejiyay saliidaha udugga, Saliidda loogu talagalay baahinta, saliidaha qoyaanka, Shidaha Saliidda, Spa, iyo Hawada
Saliid kasta oo muhiim ah waxay la timaadaa 10ml dhalooyin bunni ah. Tani waxay saliidaha ka dhigi doontaa mid cusub waxayna kaa caawinaysaa kahortagga nalka
Wonderful Saliidaha Muhiimka ah ee ikhtiyaarka dejinta hadiyadaha, taas oo moodada ku filan oo noqon doonta mid cajiib ah in loo diro qoyska ama saaxiibbada
Sida ugufiican ee loo isticmaalo saliidahan: Waxaa jira siyaabo badan oo badan oo loo adeegsado Saliidaheena Muhiimka ah, halkaan waxaa ah dhowr ...
Shidaal Shidaal: Mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ayaa ah iyaga oo isticmaalaya saliid gubi. Ku -daridda dhawr dhibcood dhibcahaaga saliidda ah waxay abuuri doontaa qurux waarta caraf udgoon, waxaad sidoo kale isku dari kartaa saliidaha si aad u abuurto urtaada.
Qubayska: Ku -daridda dhawr dhibcood oo saliiddeena ah qubeyskaaga waxay abuurtaa udgoon samaawi ah, dabiici ah oo saafi ah, waxaana la caddeeyay inay tahay hab aad wax -ku -ool ah oo aad uga faa'iidaysan karto saliidaha lagama maarmaanka ah.
Duugista: Saliidaheenu waa xoog badan yihiin, markaa fadlan si toos ah ha ugu isticmaalin maqaarkaaga. Ku darista dhibco yar saliidaha sidda (sida saliidda Grapeseed), ka dibna ku duug fooddaada, calaacalaha, qoorta, dhabarka, cagaha ama meelaha kale ee ay dhibaatadu saameysey waxay ka shaqeeyaan yaabab.
Samaynta adigu: Qaar badan oo idinka mid ah waxay jecel yihiin inay abuuraan saabuunyo, shumacyo, iyo alaabada quruxda leh, saliidahaasina way ku habboon yihiin taas. Waxay ka mid yihiin darajo daaweyn, dabiici ah, saafi ah, iyo wax kasta oo lagu farsameeyay UK, taas oo ka dhigaysa inay kuugu habboon yihiin nafta hal -abuurka leh ee halkaas ka samaysa alaabtaada.
Kuwo kale: Siyaabaha kale ee caanka ah marka laga reebo kuwa kor ku xusan waxaa ka mid ah, diffusers, barkintaada habeenkii, ka -fiirsashada, hawo -qaboojiyaha hawada baabuurka, iyo uumiga/saunas -ka.
Faa'iidooyinka baahinta saliidaha lagama maarmaanka ah:
Wuxuu hawada ka sifeeyaa boodhka iyo bakteeriyada
Wuxuu furaa marinnada hawada
Waxay ku dhacdaa niyadda
U nuugo si fudud jirka
Ha isticmaalin gudaha saliidaha lagama maarmaanka ah.
Si toos ah ha u marin maqaarka; mar walba ku walaaqo saliid side.
Ka fogow taabashada indhaha iyo xuubka xabka.
Ha isticmaalin saliidaha liinta ka hor inta aanad u gudbin shucaaca UV.
Isticmaal kaliya saliidaha lagama maarmaanka ah ee saafiga ah; iska ilaali carafyada synthetic.
Ka fogow soo-gaadhista muddo dheer adigoon hawo qaadin.
Si fiican u keydi saliidaha lagama maarmaanka ah iyo saliidaha sideha si aad uga fogaato nabaad-guurka iyo huuriga.
1 x Dhalo 150ML Saliid Muhiim ah